Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Kanada » Duulimaadka Hindiya iyo Kanada Waxay Noqoneysaa Maya
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Caafimaadka Warka • Wararka Hindiya • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Gaadiidka Kanada wuxuu sii fidinayaa Ogeysiiska Airmen (NOTAM) kaas oo xaddidaya dhammaan duulimaadyada tooska ah ee ganacsiga iyo kuwa khaaska ah ee Kanada ka imanaya Hindiya illaa Sebtember 21, 2021
Gaadiidka Kanada wuxuu kordhiyaa xayiraadaha duulimaadyada tooska ah ee ka yimaada Hindiya.
Hawlgallada xamuulka kaliya, wareejinta caafimaadka ama duulimaadyada milatariga kuma jiraan.
Rakaabka ka tegaya Hindiya ee u socda Kanada iyada oo loo marayo waddo aan toos ahayn ayaa looga baahan yahay inay ka helaan waddan COVID-19 tijaabo hore u bixitaan hore ah.
The Dowladda Kanada ayaa mudnaanta koowaad siinaya caafimaadka iyo badbaadada dhammaan dadka Kanada ku nool iyada oo la sii wado qaadashada hab ku salaysan qatar iyo cabbir dib u furitaanka xadka. Habka wajiga ah ee Kanada ee lagu yareynayo tallaabooyinka xadka waxaa lagu wargeliyaa kormeerka joogtada ah ee xogta la hayo iyo caddeymaha sayniska, oo ay ku jiraan heerka tallaalka Kanadiyaanka iyo xaaladdayada cudurrada faafa.
Iyadoo lagu saleynayo talooyinkii ugu dambeeyay ee caafimaadka dadweynaha ee ka yimid Hay'adda Caafimaadka Dadweynaha ee Kanada, Gaadiidka Kanada wuxuu gaarsiinayaa Ogeysiiska Airmen (NOTAM) oo xaddidaya dhammaan rakaabka tooska ah ee ganacsiga iyo kuwa gaarka loo leeyahay duulimaadyada Kanada ka yimaada Hindiya ilaa Sebtember 21, 2021, saacadu markay tahay 23:59 EDT. Dhammaan duullimaadyada rakaabka tooska ah ee ganacsiga iyo kuwa gaarka ah ee Kanada ka imanaya Hindiya waxay ku xiran yihiin NOTAM. Hawlgallada xamuulka kaliya, wareejinta caafimaadka ama duulimaadyada milatariga kuma jiraan.
Gaadiidka Kanada ayaa sidoo kale fidineysa shardiga la xiriira ka-hor-tagga ka-hor-tagga COVID-19 tijaabooyinka molecular ee socotada Kanada ka yimaada Hindiya iyada oo loo marayo waddo aan toos ahayn. Tani waxay ka dhigan tahay in rakaabka ka taga Hindiya ee u sii mara Canada si aan toos ahayn loo sii wadi doono in looga baahdo inay ka helaan tijaabo hore u bixitaanka COVID-19 waddan saddexaad-oo aan ahayn Hindiya-ka hor intaanay sii wadin safarkooda Kanada.
The Dowladda Kanada waxay si joogto ah ula socotaa xaaladda cudurrada faafa, waxayna si dhow ula shaqayn doontaa Dowladda Hindiya iyo hawlwadeennada duulista si loo hubiyo in hababka habboon loo dejiyay si loo suurtogeliyo in si ammaan ah loogu laabto duullimaadyada tooska ah sida ugu dhakhsaha badan marka xaaladdu oggolaato.
In kasta oo Kanada ay ku sii socoto jihada saxda ah, xaaladda cudurrada faafa iyo daboolidda tallaalku isku mid ma aha adduunka oo dhan. Dowladda Kanada waxay sii wadaysaa inay kula taliso dadka Kanada inay ka fogaadaan safarka aan muhiimka ahayn ee ka baxsan Kanada-safarka caalamiga ahi wuxuu kordhiyaa halista soo-gaadhista COVID-19 iyo noocyada kala duwan, iyo sidoo kale inuu ku faafo dadka kale. Tallaabooyinka xudduuddu waxay sidoo kale ku sii jiri karaan isbeddel marka xaaladda cudurrada faafa ay sii kordhayaan.